Ajụjụ a na-ajụkarị maka Coronavirus | RayHaber | raillynews
HomeGeneralAjụjụ a na-ajụkarị banyere Coronavirus
Ajuju ajuju banyere coronavirus
1. Kedu ihe bụ Coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV)?
Ọhụrụ Coronavirus (2019-nCoV) bụ nje nke akọwapụtara na Jenụwarị 13, 2020, n'ihi nchọpụta nke otu ndị ọrịa bụ ndị bu ụzọ gosipụta mgbaàmà na akụkụ okuku ume (fever, ụkwara, mkpụmkpụ ume) na Wuhan Province na ngwụsị December. Ihe bu ntiwaputara ihe ahu bu n'okpo azu na azu umu anumanu nke mpaghara a. O wee gbasaa site n'otu onye gaa na obodo ndị ọzọ na mpaghara Hubei, karịsịa Wuhan na ógbè ndị ọzọ Republic of China.
2. Kedu otu esi ebufe Coronavirus ọhụrụ gị (2019-nCoV)?
A na-ebute ya site na iku ume nke ụmụ irighiri mmiri agbasasị na gburugburu ebe obibi site na ịsụgharị nke ndị ọrịa. Mgbe imetachara ihe ndị dị na akụkụ ahụ nwere mmerụ ahụ, nje nje a nwere ike iburu ya gaa ihu, ihu, imi ma ọ bụ ọnụ na-asaghị ahụ. Ọ dị mma imetụ aka n ’anya, imi ma ọ bụ n’ọnụ iji metọọ anya, imi ma ọ bụ ọnụ.
3. Kedu otu esi achọpụta ọrịa Coronavirus ọhụrụ?
Ule olu ndi mmadu choro maka onyocha choronavirus ohuru a n’obodo anyi. A na-eme nnwale nyocha ahụ naanị na National Virology Reference Laboratory nke General Directorate of Health Public.
4. Enwere ọgwụ na-arụ ọrụ nke nje virus nke enwere ike iji gbochie ma ọ bụ gwọọ ọrịa Coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV)?
Enweghị ọgwụgwọ dị irè maka ọrịa ahụ. Dabere na ọnọdụ nke onye ọrịa ahụ, a na-etinye ọgwụgwọ nkwado dị mkpa. A na-enyocha ịdị irè nke ọgwụ ụfọdụ na nje ahụ. Agbanyeghị, ugbu a enweghi ọgwụ dị irè nke nje.
Ọgwụ nje nwere ike igbochi ma ọ bụ gwọọ ọrịa coronavirus ọhụrụ (5-nCoV)?
Ee e, ọgwụ nje anaghị emetụta nje, ha dị irè naanị megide nje. Ọhụrụ Coronavirus (2019-nCoV) bụ nje na ya mere ekwesighi iji ọgwụ mgbochi gbochie ma ọ bụ gwọọ ọrịa.
6. Ogologo oge ole ka oge nnabata nke Coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV)?
Oge nje a na-ebute oria dị n’agbata ụbọchị abụọ na mkpụrụ ụbọchị iri na anọ.
7. Gini bu akara na oria Coronavirus ohuru (2019-nCoV)?
Agbanyeghi na akukoputara na enwere ike ghara inwe oria n’enweghi oria, onaghi ama onu ya. Mgbaàmà ndị a na-ahụkarị bụ ahụ ọkụ, ụkwara na mkpụmkpụ ume. N'ọnọdụ siri ike, oyi baa, oke iku ume, akụrụ na ọnwụ nwere ike ịmalite.
8. willnye ga-emetụta Coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV) karịa?
Dabere na data enwetara, ndị nwere nká na ọrịa concomitant (dị ka ashma, ọrịa shuga, ọrịa obi) nọ n'ihe ize ndụ dị elu nke ịmalite nje. Site na data dị ugbu a, a maara na ọrịa ahụ na-arịwanye elu na 10-15% nke ikpe, na ọnwụ n'ihe dị ka 2% nke ikpe.
9. Ọrịa Coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV) ọ kpatara ọnwụ mberede?
Ọrịa a na-egosi nwayọ nwayọ, dika data sitere na ndị ọrịa. N’ụbọchị mbụ ndị mbụ, a na-ahụta mkpesa ndị na-adị obere (dịka ọkụ, akpịrị mgbu, adịghị ike) wee tinye akara ndị dị ka ụkwara na mkpụmkpụ ume. Ndi oria n'ozuzu oke ka ha gha aru na ulo ogwu mgbe ubochi asaa gasiri. Ya mere, vidiyo banyere ndị ọrịa nọ na mgbasa ozi mmekọrịta, daa na mberede daa ma daa ọrịa ma ọ bụ nwụọ, anaghị egosipụta eziokwu.
10. N'oge ọhụrụ coronavirus ọrịa kọrọ site na Turkey (2019-NCover) Ọ bụ n'ebe a ikpe?
Mba, achọpụtabeghị ọrịa Coronavirus (2019-nCoV) na obodo anyị ma (dịka nke ọnwa asaa nke ọnwa Febụwarị 7).
11. Kedu mba, ewezuga ndị mmadụ Republic of China (PRC) nwere ihe ize ndụ maka ọrịa ahụ?
Oria ka bu nke akari n’obodo ndi China. Ihe ịtụnanya a hụrụ na obodo ndị ọzọ nke ụwa bụ ndị sitere na PRC rue mba ndị a. N’obodo ụfọdụ, ụmụ amaala mba ole na ole butere ọrịa ahụ na mba ahụ. Ugbu a, enweghị mba ọzọ karịa PRC ebe okwu ụlọ na-agbasa ngwa ngwa. Kọmitii Ndụmọdụ sayensị nke Ministry of Health na-adọ aka ná ntị naanị maka PRC na "ịghara ịga ọ gwụla ma ọ dị mkpa". Ndị njem kwesịrị ịgbaso ịdọ aka ná ntị nke ndị isi obodo na nke mba.
12. Gini bu ozi nke ulo oru ahu ike na eme?
Ministri na-enyocha ihe niile mere n'ụwa na mgbasa nke mba niile. E mepụtarala New Board Coronavirus (2019-nCoV) Science Science. E mere nzukọ nyocha ihe egwu na Science Board maka ọrịa Coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV). n'akụkụ niile nke nke (Turkey ókè na Ala gbara osimiri okirikiri Directorate General nke Health, Public Ụlọọgwụ, General Directorate of Emergency Medical Services Directorate General maka Mpụga Relations Directorate-General, dị ka ihe niile ndị nketa oke) site gụnyere ihe ndị na-soro na-enwe nzukọ ma na-aga n'ihu ka a mere na a mgbe nile.
E guzobere otu ndị na-arụ ọrụ na ndabere nke 7/24 ntọala na Ọrụ Mpụ Ọha Ahụike Ọha na-adị na etiti Director General nke Ahụike Ọha. Na mba anyị, e lebara anya dị mkpa na ntinye nke thetù Ahụ Ike Worldwa. N'ebe ọnụ ụzọ mbata nke ala anyị, dịka ọdụ ụgbọ elu na ọnụ ụzọ mbata nke oké osimiri, e meela ihe iji chọpụta ndị njem na-arịa ọrịa nwere ike isi ebe ndị dị ize ndụ pụta, na-ekpebikwala ihe aga-eme n'ihe banyere enyo ọrịa. PRC kwụsịrị ife efe na PRC wee rue 1 Machị. Ngwa nyocha nke igwefoto ọkụ, nke ebubere maka ndị njem si na PRC, ka agbasawanyere ịgụnye mba ndị ọzọ ruo ụbọchị 05 nke ọnwa 2020.
Ntụziaka maka nchọpụta nke ọrịa ahụ, usoro ndị aga-etinye na ọnọdụ enwere ike, usoro mgbochi na ịchịkwa akwadoro. Emepụtala usoro nchịkwa maka ikpe akọwapụtara ma kọwaa ọrụ na ọrụ nke ndị ọzọ metụtara. Ntuziaka ahụ gụnyere ihe ndị mmadụ ga-aga ma ọ bụ si mba ndị nwere okwu ikpe ga-eme. Akwụkwọ ntuziaka na ngosipụta banyere ntuzịaka a, azịza ajụjụ ndị a na-ajụkarị, akwụkwọ ịma ọkwa na broshuọ dị na weebụsaịtị nke General Directorate of Health Health. Na mgbakwunye, a na-ewere samonkụkụ iku ume site na ndị na-agbaso nkọwa nke ikpe enwere ike ma nọpụ iche n'ọnọdụ ọnọdụ ahụike ruo mgbe enwetara nsonaazụ nke iku ume.
13. Iji igwefoto kpo oku ka ihe zuru oke?
A na-eji kamera na-ekpo ọkụ na-achọpụta ndị nwere ọrịa ọkụ na iji na-eme nyocha ọzọ nke ma ha na-ebute ọrịa site na kewapụrụ ha na ndị ọzọ. N’ezie, ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta ndị ọrịa n’arụghị ahụ ọkụ ma ọ bụ ndị ka nọ na ọkwa inubom ahụ na-ebutebeghị oria. Agbanyeghị, ebe enweghi usoro ngwa ngwa ọzọ dị irè nke enwere ike iji mee nyocha, mba niile na-eji igwefoto ọkụ. Na mgbakwunye na igwefoto ọkụ, a na-agwa ndị njem si mpaghara ahụ dị ize ndụ n'asụsụ dị iche iche n'ụgbọelu ahụ, na-ekesakwa broshuọ ozi dị na asụsụ mba ọzọ na isi paspọtụ.
14. Enwere ọgwụ mgbochi Coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV)?
Mba, o nweghi ogwu obula meputara. Enyere na ogwu nwere ike iji mee ihe n’enweghị nsogbu ọ bụla n’agbanyeghi mmepe nke teknụzụ nwere ike imepụta n’afọ mbụ.
15. Gini bu aro ndi a bu maka ijide oria?
Proposedkpụrụ dị iche iche a tụrụ aro iji belata ihe niile gbasara mbufe ọrịa nje na-efe efe metụtara New Coronavirus (2019-nCoV). Ndị a bụ:
- Ekwesịrị ịtụle nhicha aka. E kwesịrị iji ncha na mmiri kwọọ aka ma ọ dịkarịa ala sekọnd iri abụọ, a ga-eji ọgwụ antiseptics aka na-egbu egbu mee ihe na-enweghị ncha na mmiri. Enweghị mkpa iji ncha na antiseptik ma ọ bụ mgbochi nje, ncha nkịtị zuru ezu.
- Ekwesighi imetụ ọnụ, imi na anya aka na-enweghị na-asa aka.
- Ndị na - arịa ọrịa kwesịrị izere ịkpọtụrụ (ma ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume, nọrọ ma ọ dịkarịa ala 1 m).
- A ga-asacha aka mgbe niile, ọkachasị mgbe akpọtụrụ ndị ọrịa ma ọ bụ gburugburu ha.
- Taa, ọ dịghị mkpa maka ndị nwere ahụ ike iji masks na mba anyị. Onye na-arịa oria ọ bụla na iku ume iku ume kwesịrị ikpuchi imi ya na ọnụ ya site na mpempe akwụkwọ anụ ahụ n'oge ụkwara ma ọ bụ imi, ọ bụrụ na enweghị mpempe akwụkwọ, jiri egbugbere ọnụ dị n'ime, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ịbanye na ebe ndị mmadụ juru, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, imechi ọnụ na imi, na-eji ihe mkpuchi ahụike ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. na-atụ aro.
16. Kedụ ihe ndị mmadụ ga-eme njem gaa mba ndị nwere nnukwu ndidi, dịka ndị Republic of China, ga-eme iji gbochie ọrịa ahụ?
- Ekwesiri ịsacha aka mgbe nile, ọkachasị mgbe akpọtụrụ ndị ọrịa ma ọ bụ gburugburu ha.
- Ọ bụrụ na ọ ga - ekwe mee, ekwesighi ileta ya na ngalaba ahụike n'ihi ọnụnọ nke ndị ọrịa, ma ekwesịrị iwelata ịkpọtụrụ ndị ọrịa ndị ọzọ ebe ọ dị mkpa ịga ụlọ ọrụ ahụike.
- Mgbe ị na-akọ ụkwara ma ọ bụ imi, ekwesịrị iji mpempe anụ ahụ kpuchie imi na ọnụ, n’ọnọdụ ebe enweghị akwụkwọ anụ ahụ, a ga-eji ya mee ihe, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, a gaghị abanye ya n’ọnọdụ ndị mmadụ juru, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịbanye, ọnụ na imi kwesịrị imechi.
- A ga-ezere iri anụ anụmanụ adịghị ọcha ma ọ bụ enweghị mkpuchi. Ekwesịrị ịhọrọ nri esiri esi nri.
- A ga-ezere ebe ndị dị ize ndụ maka ọrịa ọrịa n'ozuzu, dịka ugbo, ahịa anụ ụlọ na ebe a ga-egbu anụmanụ.
- Ọ bụrụ na mgbaàmà iku ume ọ bụla na-apụta n’ime ụbọchị 14 ka njem gachara, a ga-eyi nkpuchi gaa ebe nlekọta ahụike kacha nso, a ga-agwa dọkịta banyere akụkọ njem ahụ.
17. Gịnị ka ndị mmadụ na -aga mba ndị ọzọ kwesịrị ime iji gbochie ọrịa ahụ?
Thekpụrụ dị iche iche a tụrụ aro iji belata ihe niile gbasara mbufe ọrịa nje na-efe efe metụtara New Coronavirus (2019-nCoV). Ndị a bụ:
- Mgbe ị na-akọ ụkwara ma ọ bụ ịmịchaa, ekwesịrị iji mpempe anụ ahụ kpuchie imi na ọnụ ya, n’ọnọdụ ebe enweghị mpempe anụ ahụ, a ga-eji ya tinye aka n’ikpere aka, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ekwesighi ịbanye na igwe mmadụ na ebe.
- A ga-ahọrọ nri esiri esi karịa ihe oriri.
18. Enwere ihe ize ndụ nke nnyefe coronavirus site na ngwugwu ma ọ bụ ngwaahịa sitere n'aka ndị Republic of China?
N'ozuzu, nje ndị a nwere ike ịdịgide ruo oge dị mkpirikpi, yabụ enweghị mmetọ site na ngwugwu ma ọ bụ ibu na-atụ anya.
19. Enwere ihe ize ndụ nke ọrịa coronavirus ọhụrụ na mba anyị?
A ka nwere okwu ikpe na mba anyị. Dịka ọtụtụ mba ụwa, enwere ike bụrụ na ikpe na-eme na mba anyị .. Organizationtù Ahụ Ike enweghị ihe mgbochi ọ bụla n'okwu a.
20. Enwere mgbochi ndị njem na China?
A kwụsịrị ịhapụ ụgbọ elu niile sitere na China site na 5 nke February 2020 ruo Machị 2020. Kọmitii Ndụmọdụ sayensị nke Ministry of Health na-adọ aka ná ntị naanị maka PRC na "ịghara ịga ọ gwụla ma ọ dị mkpa". Ndị njem kwesịrị ịgbaso ịdọ aka ná ntị nke ndị isi obodo na nke mba.
21. Kedụ ka aga-esi kpochapụ ụgbọ ala?
Ọ na-atụ aro ka ụgbọ ndị a na-ekusa ikuku nke ọma ma na-asacha akwa na mmiri. A na-atụ aro ka edozie ụgbọala ndị ahụ mgbe ejiri ya, ma ọ bụrụ na enwere ike.
22. Gini bu ihe eji eche nche dika agasi na ugbo ala ndi njem?
Ekwesiri isi ya ike na ikuku na-ejikarị ikuku dị ọcha n'oge a na-eji ya. N'ebe ikuku na-adọba ụgbọala, ekwesịrị ịhọrọ ka ikpo ya juo ma mee ka ikuku jupụta n'èzí. Ekwentị ekwesịghị iji ikuku gbanwee.
23. Hotel, ụlọ mbikọ, wdg nke ndị ọbịa na-abata n’otu. A nwere ọrịa ọ bụla nwere ike ibute ndị ọrụ kenyere ha mgbe ha bịara?
Ndị ọbịa, ndị na-ebu ihe nke onwe ha, dị ka igbe, anaghị atụ anya ka ha bụrụ ọrịa na-efe efe (na-etinye ihe ize ndụ nke mgbasa ọrịa) ọbụlagodi ma ọ bụrụ na nje ahụ agaghị adị ndụ na-adịghị ndụ ruo ogologo oge. Agbanyeghị, n'ozuzu, mgbe usoro ndị a gasịrị, a ga-asa aka ozugbo ma ọ bụ sachaa aka site na iji ọgwụ na-egbu egbu nke mmanya.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na enwere ndị ọbịa na-esite na mpaghara ebe ọrịa ahụ siri ike, ọ bụrụ na ahụ ọkụ, ọsụsọ, ụkwara n'etiti ndị ọbịa ahụ, ọ ka mma iyi akwa mkpuchi ahụ maka onye a na ọkwọ ụgbọ ala iyi mkpuchi ahụike maka nchebe onwe. Ekwesiri ijide n'aka na a kpọrọ 112 na nyere ozi ma ọ bụ na-akọwara ụlọ ọrụ ahụike duziri tupu oge eruo.
24. Kedụ ihe ndị a ga-eme na nkwari akụ?
Ihicha mmiri na ihe ndozi zuru oke na ebe obibi. Ekwesịrị ị attentiona ntị na mbụ ndị aka na-emetụ aka, aka aka, batrị, aka aka, mposi na nhicha nhicha ahụ. Onweghi ihe sayensi gosiputara na iji otutu ihe ekwuputara na oru oma nke oria a na enye nchedo.
Ekwesịrị itinye uche na nhicha aka. E kwesịrị iji ncha na mmiri kwọọ aka ma ọ dịkarịa ala sekọnd iri abụọ, a ga-eji ọgwụ antiseptics aka na-egbu egbu mee ihe na-enweghị ncha na mmiri. Enweghị mkpa iji ncha na antiseptik ma ọ bụ mgbochi nje, ncha nkịtị zuru ezu.
Onye na-arịa oria ọ bụla na iku ume iku ume kwesịrị ikpuchi imi ya na ọnụ ya site na mpempe akwụkwọ anụ ahụ n'oge ụkwara ma ọ bụ imi, ọ bụrụ na enweghị mpempe akwụkwọ, jiri egbugbere ọnụ dị n'ime, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ịbanye na ebe ndị mmadụ juru, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, imechi ọnụ na imi, na-eji ihe mkpuchi ahụike ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. na-atụ aro.
Ebe ọ bụ na nje ahụ enweghị ike ịdịgide ndụ na-adịghị mma ruo ogologo oge, a gaghị atụ anya mmetọ maka ndị na-ebu akpa onye ọrịa ahụ.
25. Kedu usoro ndị ọrụ ụgbọ elu kwesịrị iwere?
Ekwesiri ime usoro iji gbochie ọrịa.
Ebe ọ bụ na nje ahụ enweghị ike ịdịgide ndụ na-adịghị ndụ ruo ogologo oge, a gaghị ebufe ndị na-ebu igbe akpa onye ọrịa. O kwesịrị ekwesị itinye ọgwụ na-egbu egbu na - egbu egbu ebe ọ bụla enwere ike ịnwe ya.
26. predị akpachara anya kwesiri ka ndị ọrụ na-arụ n'ụlọ nri na n'ụlọ ahịa ebe ndị njem bịara?
Ekwesịrị iji usoro nchedo ọrịa izugbe.
Ihicha mmiri na ihe ndozi zuru oke maka nhicha elu elu. Ekwesịrị ị attentiona ntị na ntachasị ụzọ, nsị mmiri, aka aka, ụlọ mposi na ebe a na-asa ahụ. Enweghi ihe akaebe sayensi na iji otutu ahia nke ekwuru na ha di ire maka nje a na enye nchedo ndi ozo.
Ọ dị mma itinye antiseptik na-egbu egbu nke mmanya na -enweta ebe enwere ike.
27. Gini bu ihe mgbochi ogwugwu?
Mgbe ị na-a coughụ ma ọ bụ mgbe ọsụsọ, a na-atụ aro iji mpempe anụ ahụ kpuchie imi na ọnụ, ma ọ bụrụ na anụ ahụ adịghị, jiri ikiaka dị n'ime, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịbanye ebe ndị mmadụ jupụtara.
28. Ana m eziga nwa m n'ụlọ akwụkwọ, enwere ike ibute ọrịa Coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV)?
Ọrịa ọrịa coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV) nke ebidola na China achọpụtabeghị na obodo anyị ruo taa wee nwee usoro dị mkpa iji gbochie ịbanye ọrịa ahụ na mba anyị. Nwa gị nwere ike ịnwe nje na-akpata flu, oyi, na oyi na ụlọ akwụkwọ, mana echeghị na ọ ga-ezute ya n'ihi na Coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV) adịghị ekesa. N'ọnọdụ a, Ozi Mịnịstrị ahụike nyere ndị ụlọ akwụkwọ ahụ ozi dị mkpa.
29. Kedụ ka aga-esi sachapụ ụlọ akwụkwọ?
Ihicha mmiri na nhicha mmiri zuru oke maka nhicha ụlọ akwụkwọ. Ekwesịrị ị attentiona ntị na ntachasị ụzọ, nsị mmiri, aka aka, ụlọ mposi na ebe a na-asa ahụ. Onweghi ihe sayensi gosiputara na iji otutu ihe ekwuputara na oru oma nke oria a na enye nchedo.
30. Na nloghachi nke semester ezumike m na-alaghachi mahadum, nọrọ n'ụlọ ụmụ akwụkwọ, enwere m ike ịnweta nje New Coronary (2019-nCoV)?
Ọrịa ọrịa coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV) nke ebidola na China achọpụtabeghị na obodo anyị ruo taa wee nwee usoro dị mkpa iji gbochie ịbanye ọrịa ahụ na mba anyị.
Ọrịa ahụ nwere ike ịnwe nje na-akpata oyi na oyi, mana atụghị anya ka ọ hụ ebe Coronavirus ọhụrụ ahụ (2019-nCoV) na-ekesa. N'ọnọdụ a, e nyere informationlọ Akwụkwọ Mmụta Kasị Elu, Ebe E Si Nweta Ebe E Si Nweta Ndị Dọkịta na similarmụ akwụkwọ ndị yiri ya.
31. Anụmanụ ụlọ enwere ike iburu na bufee New Coronavirus (2019-nCoV)?
Anaghị atụ anya ka anụ ụlọ dị ka nwamba / nkịta na New Coronavirus (2019-nCoV). Agbanyeghị, mgbe ịmechara anụ ụlọ, a ga-eji ncha na mmiri kwọọ aka mgbe niile. N'ihi ya, a ga-enye nchebe pụọ na ọrịa ndị ọzọ enwere ike ibunye site na anụmanụ.
32. Nwere ike iji mmiri nnu hichaa imi gị wee gbochie ọrịa New Coronavirus (2019-nCoV)?
Mba Iji brine na-ehicha imi mgbe niile abaghị uru ọ bụla na ichebe ọrịa nje New Coronary (2019-nCoV).
Mmanụ mmanya nwere ike igbochi ọrịa coronavirus ọhụrụ (33-nCoV)?
Mba Ojiji mmanya gbara ụka abaghị uru iji gbochie ọrịa New Coronavirus (2019-nCoV).
AJỤJỤ AJỤJỤ NDỊ AJỤJỤ DỊ N'AKWỤKWỌ NDỊ Ị GA-EME
Ajuju Ajuju na Azịza Banyere Istanbul Airport
Echiche Uysal na mkpebi UKOME na UBER
Kedu ajụjụ ndị dị na faịlụ ahụ gara Minista Yıldırım maka ụgbọ oloko dị elu?
Nkọwa nke Rahmanlar Bridge si DSI
Btk na Logistics Center Banyere Deputy MP
Ụlọ ọrụ dị iche iche dị iche iche na-arụ ọrụ na usoro okporo ụzọ okporo ígwè
Izizi Ozi na Nkwurịta okwu nke Director General, Fidansoy
Njikọ Links na Okporo ígwè System na Turkey
Onye isi oche Kocaoğlu, Ajụjụ gbasara Ụgbọ njem na TV Aegean
Kılıçdaroğlu'nun Kadıköy-Aghachite Obodo Ugo na-ekwu maka ọnụ ahịa…
Turkey kwadebere Iwu na liberalization nke Railway Transport ...
Ngwa nwa oge maka Dar toca Gebze Metro Study